उता फेरि अ.सु.प.को सुरु, यता बाहुनक्षेत्रीको काठमाडौँमा हुँदै
बन्द कै भरमा सरकारसित आफ्ना माग पूरा गराउने सहमति हुने क्रम सुरु भएपछि परस्पर विरोधी समूहहरुले बन्दको शृङ्खला सुरु गरेका छन्। एउटा समूहले फलानो माग राखेर बन्द गर्‍यो, सरकारसित सहमति गर्‍यो, बन्द फिर्ता लियो। लगत्तै अर्को समूहले त्यस्तो सहमति किन गर्‍या, फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै अर्को बन्द गर्‍यो। अहिले यस्तै भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा झण्डै एक महिनादेखि यस्तै क्रम चलिरहेको छ। पहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुले आन्दोलन गरे २१ दिनसम्म। त्यसपछि तीन दलका नेतासहित बसेर सेती-महाकाली नटुक्र्याउने र परेमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भो। आन्दोलन फिर्ता भो। भोलिपल्टैदेखि थारुहरुले बन्द सुरु गरे। हिजो झापा, उदयपुर र सिरहा पूर्वी थारुवान-थरुहट-कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म मध्ये तराई-सिम्रनगढ प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान-थरुहट प्रदेश हुने गरी तराईका २२ जिल्ला पूर्वी झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संविधान सभामा लाने सहमति भयो। अब यही सहमतिको विरोधमा फेरि आजदेखि सुदूरपश्चिम बन्द। Continue reading बन्द- एउटाको सकियो, अर्कोको पालो
काठमाडौँको दरबारमार्गमा आज साँझ व्यापारीहरुको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आह्वानमा भएको सद्‍भाव र्‍यालीका केही फोटोहरु। रोचक त के रह्यो भने बन्दको विरोधमा आयोजना गरिएको भनिएको यो कार्यक्रम कै आयोजकको नेतृत्वमा संखुवासभामा भने जिल्ला टुक्राउन नहुने भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द गरिरहेको रहेछ।
Continue reading दरबारमार्गमा ‘सद्‍भाव’ र्‍याली
बसन्तपुरमा हुने भनी भाष्करराज राजकर्णिकार कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको एफएनसीसीआई र विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको सीएनआई आयोजकका रुपमा प्रचारित सद्‌‌भाव र्‍याली त्यहाँ हुन सकेन। त्यहाँ आदिवासी जनजातिको एकता सभा थियो। यो अलि फरक खालको सभा थियो। यहाँ एउटै रङ्गको लुगा लगाउन र एउटै भाषा बोल्न बाध्य गरिएको थिएन। आ-आफ्नो संस्कृति झल्कने पहिरन लगाएर आएका थिए जातजाति र आ-आफ्नै भाषामा गीत, नृत्य र कविता प्रस्तुत गरे। तर दुवै कार्यक्रमको सार एकै थियो- एकता र सदभाव Continue reading बसन्तपुरमा भने अर्कै ‘एकता’ सभा
यो फैसला अनुसार जेठ १४ गते संविधान जारी नभए जेठ १५ गते सं‍विधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुनेछ। जेठ १४ गते संविधान जारी हुने अहिलेसम्म कुनै छाँटकाट छैन। Continue reading लौ हेरम् न त सर्वोच्चले के गर्दो रहेछ
आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति र सरकारबीच आज राति भएको वार्तामा कुरा मिलेपछि बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन्। कुरा नमिलेको भए भोलि पनि बन्द जारी राख्‍ने भनिएको थियो। वार्तामा ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको हो।
के के भयो सहमति, हेर्नुस्-
Continue reading वार्तामा कुरा मिल्यो, बन्द लगायतका आन्दोलन फिर्ता
नभन्दै बिहान मैले जेको संभावना थियो भनेर तलको ब्लग लेखेको थिएँ, त्यस्तै भएको छ। तर मैले यो कुरा चाहिँ अलि ढिलो हुन्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ। १२/१३ गते तिर बल्ल। तर दलहरुले आजै तीन महिना समय थप्नेमा सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको चार मठाधीश (कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा)हरु म्याद थप्न सहमति जुटेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन महिना थप्ने गरी संविधान संशोधनको विधेयक स‍सदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। तर लाजै पचाएर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले हैन हैन भनेर झुक्याउन खोजेका थिए। सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ भित्र जसरी पनि संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने फैसला गरिसकेकोले देश अब कानुनी विवादमा समेत फँस्ने निश्चित छ। Continue reading संविधान सभाको म्याद ३ महिना थपिने
जेठ १४ आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ। अझै पनि केही नेताहरुले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुन्छ वा हुनै पर्छ भनी भाषण गरिरहेका छन्, मिडियाले छापिरहेका छन् र त्यसैको विश्वासमा पर्नुभएको छ ? तपाईँले पनि जेठ १४ भित्र केही गरी संविधान आउला भन्ने ठान्नुभएको छ ? जाग्नुस् ! सपना देख्नु एउटा कुरा हो तर वास्तविकता यो हो- जेठ १४ भित्र संविधान आउँदैन। संविधानको नाम के राख्न‍े भन्नेमा त अहिलेसम्म यही हो भनेर निश्चित गर्न नसकेका दलहरुले यति धेरै विवादहरुलाई हतारहतार सल्टाउन सक्छन् ? अब समय नै बितिसक्यो। अब त जति गरे पनि संवैधानिक समितिबाटै ड्राफ्ट पास गरी संविधान सभामा पठाउन पनि समय पुग्ने छैन। त्यसो भए केही न केहीको खाका, मस्यौदा त आउला नि ? त्यो पनि निश्चित छैन। राज्य पुनर्संरचनामा मिलेको भनी प्रचारित हस्ताक्षर नभएको जेठ २ गतेको सहमति ३२० जना सभासदको हस्ताक्षरसहितको पत्र र आन्दोलनहरुपछिको स्थितिमा फरक परिसकेको छ। प्रदेशको विवादसँगै शासकीय स्वरुपमा पनि कङ्ग्रेस र माओवादी फेरि सहमतिबाट पछाडि फर्कने स्थिति देखापरिसकेको छ। अनि जेठ १४ मा संविधान नबने के हुन्छ त ? भयावह स्थिति आउँछ ? आउँदैन। केही हुनेवाला छैन। Continue reading जेठ १४ मा संविधान ? आउँदैन !
Continue reading अझै बन्दको मार
आदिवासी जनजाति महासंघको आह्वानमा सुरु भएको ७२ घण्टे बन्दको पहिलो दिन काठमाडौँमा भयावह रुप देखियो। लेख्‍नेले लेख्‍न नसक्ने र सुन्नेले भन्न नसक्ने खालका साम्प्रदायिक नारा लागे। मान्छेहरु पत्रकारमाथि भएका आक्रमणमा बढी केन्द्रित भएका छन्। निश्चय पनि सूचनाका संवाहकमाथि हुने आक्रमण सह्य हुन सक्दैन। तर त्योभन्दा पनि गम्भीर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक नारा आज लागेका छन्। समय मै यो झिल्कोलाई निभाउन सकिएन भने आगोले ठूलो रुप लिन सक्नेछ र यसले मलाई र तपाईँलाई कसैलाई पनि बाँकी राख्‍ने छैन। Continue reading साम्प्रदायिक नारा लगाउनेलाई कारबाही गर !
आज फेरि बन्द छ। आफ्ना माग पूरा गराउन बन्द गराउनै पर्ने मानसिकता सबैमा हावी हुन थालेपछि यस्तो हुन थालेको हो। काठमाडौँमा विगत १३ दिनमा बन्द आह्वान गरिएको यो आठौँ पटक हो। तराईका केही जिल्लामा लगातार बन्द भएको आज छैटौँ दिन हो। काठमाडौँमा केही बन्दको असर बिल्कुल परेन। तर केही बन्दले पूरै ठप्प बनायो। आजदेखि सुरु भएको तीन दिने बन्दको पहिलो दिन बिहान पनि अधिकांश भाग ठप्प छ।
Continue reading आज फेरि बन्द